Ny fahatahorana, fahatsoram-po, ny fahatokiana amin'ny fandavan-tena, ny fahalalahan-tanana, ny fifehezan-tena, ny toe-panahy ary ny fiantrana, ny fandalinana, ny famonoana olona ary ny fahitsiana; tsy faharatsiana, fahamaotinana, ary fahalalahana amin'ny fahatezerana, fametraham-pialana, fitovian-jo, ary tsy resaka ny fahadisoan'ny hafa, ny fangoraham-po amin'ny ankapobeny, ny fahamaotinana ary ny fahalemem-panahy; faharetana, hery, herim-po ary fahadiovana, fisainana mana-tena, fahamendrehana, tsy famaliana, ary ny fahalalahana tsy ho takatry ny saina, ireo no mariky ny azy izay ny toetra amam-panahiny dia ny toetran'Andriamanitra, ry zanak'i Bharata.
Vol. 1 DECEMBER, 1904. Tsia
Tamin'ny andro voalohan'ny volana Desambra, ny masoandro izay nihamaina hatramin'ny andro voalohany tamin'ny roa-polo jona, dia nanomboka ny solstice ririnina, tao amin'ny famantarana capricorn, famantarana famantarana ny zodiak. Ny andro telo taorian'io dia natokan'ireo tranainy tamin'ny fombafomba ara-pivavahana. Tamin'ny misasak'alina fahefatra amby roapolo, izay fiandohan'ny fahadimy amby roapolo, satria ny antokon-kintana fantatra amin'ny anarana hoe Virectial Virgie na Virgo, marika fahenina an'ny zodiak dia nitsangana teo ambonin'ny faravodilanitra, dia nihira hira fiderana izy ireo ary teo izy ireo teo. nanambara fa teraka ny Andriananahary; fa Izy no mpamonjy izao tontolo izao amin'ny haizina, ny fahantrana ary ny fahafatesana. Tamin'ny taona dimy amby roapolo tamin'ny volana Desambra, ny Romana dia nanao fetin'ny fifaliana 'ny' festival solar 'ho fankalazana ny nahaterahan'Andriamanitry ny Andro, ary ny lalao tamin'ny faribolana dia nanomboka tamin'ny fifaliana lehibe.
Io Andriamanitry ny Andro io, ilay Mpamonjy izao tontolo izao, dia zanaky ny zazavavy Isis virjiny niantso ny tenany ho reniny tao anaty soratra ao amin'ny Tempolin'i SaÃ´s izay niteny hoe: "Ny voa izay naterako dia ny masoandro." € Tamin'ny vanim-potoana (fetin'ny Noely) dia nankalazain'ny Romanina fa tsy tamin'ny Romanina taloha, fa tamin'ny andro fahagola, dia tamin'ny fotoana nanjakan'i Virjin'ny virjely tsy misy mahafaty, "Maya", "Mareâ". ny tanan'ny fahamarinana, ny andrian'ny fahamarinana, ny Mpamonjin'izao tontolo izao.
Ny toerana nahaterahana dia voalazan'ny olona samihafa. Ny Ejiptiana dia milaza azy io ho toy ny zohy na vatam-paty, hoy ny Persiana fa grotto io, milaza ny Kristiana fa fihinanany io. Amin'ny zava-miafina rehetra kosa, dia voatahiry ny hevitry ny tsirairay avy, satria avy amin'ny fitoerana masina na zohy masina no nahaterahan'ny Initiate, ny indroa teraka, ny nanomezam-boninahitra azy, ary adidiny ny mivoaka mivoaka eo amin'izao tontolo izao mba hitory sy hampianatra sy amin 'ny alàlan' ny fahazavana izay tao anatiny mba hampionona ny alahelo sy ny fahoriana; hanasitrana ny marary sy ny mandringa, ary ny hamonjy ny olona amin'ny maizina tsy fahalalana.
Manjavozavo amin'ireto finoana taloha ireto ny fahatokisana amin'ny varotra ara-barotra, ny siansa, ary ny teolojia matanjaka.
Ny masoandro dia tandindon'i Kristy, afovoany, ara-panahy ary tsy hita maso, izay ny fisiany ao amin'ny vatana dia ny hamonjy azy amin'ny famafana sy ny fahafatesana. Ny planeta no fitsipika izay miantso ny fisian'ny vatana hita maso ho toy izao rehetra izao, ary na dia io vatana ara-batana io na izao tontolo izao aza dia haharitra ny herin'ny fanahy. Ny trangan-javatra iainan'ny masoandro, noho izany dia manondro ny fotoana sy vanim-potoana izay ity foto-pitsipik'i Kristy ity dia afaka maneho tsara ny fahatsiarovan-tena ny olona; ary ny vanim-potoanan'ny Krismasy dia iray tamin'ny fotoana lehibe nanatanterahana ny fombafomba masina tao amin'ny Mysteries.
Tsy nisy olona nanome ny foto-kevitra ny hevitra tsy hahomby amin'ny zava-misy fa ny tantaran'ny nahaterahan'i Jesosy, Zoroaster, Buddha, Krishna, Horus, Hercules, na izay mpamonjy izao tontolo izao aza, dia ny toetrany sy ny famaritana. ny dian'ny masoandro amin'ny alàlan'ny famantarana roa ambin'ny folo ny zodiaka. Tahaka ny eo amin'ny lalan'ny masoandro, dia toy izany koa amin'ny Mpamonjy tsirairay: teraka izy, enjehina, mitory ny filazantsaran'ny famonjena, mitombo ny tanjaka sy ny hery, ny fampiononana, ny fanasitranana, ny fampahalalana ary ny fahazavana an'izao tontolo izao, dia nohomboana, maty ary nalevina , hatsangana indray ary hatsangana amin'ny heriny sy ny heriny ary ny voninahiny. Ny mandà an'ity zava-misy ity dia ny fitoriana ny tsy fahalalana ataontsika na ny fiekena ny tenantsika hoe tsy mandefitra sy tsy mivadika.
â € œTamin'izay kosa, hoy ny fitarainan'ny sekta tamim-pahatsorana sy natahotra, â € œSoa ekeko fa izany dia ho tanteraka izany amin'ny fanantenana sy ny fampanantenako fanavotana sy famonjena. ny fitiavan-karena tsy mahita ao am-pon'ny olona izay heveriny ho mpifaninana aminy, ary tsy mieritreritra ny fanaintainana omeny sy ny fanantenana nesoriny tamin'io mpino io, â € œadmit a izany ary milaza ny loza hiafara ny sekta rehetra sy ny fivavahana rehetra. Ho tafintohina izy ireo ary hanjavona toy ny farampanala mitaona ny masoandro mahamay.â €
Ho an'ny sectarian sy ny materialista, dia mamaly isika hoe: Tsara kokoa ny manaiky ny fahamarinana na dia tokony hiteraka ny forongony sy ny sampy izay naorintsika teo anelanelan'ny jiro sy hanesorana antsika ary hamela antsika tsy ho eo noho ny hanohizana ny mino. ao amin'ny tontolon'ny haizina nolovain'ny monsters tsy hita. Saingy ny ampahany sasany amin'ny fahamarinana dia nambaran'ny mpitondra fivavahana sy ny mpanaraka ny fitiavan-karena. Ny tsirairay amin'izy ireo anefa dia mahery fihetsika; samy mihevitra ny adidiny fahefany ny handresy lahatra ny fahadisoany ary mamadika azy amin'ny finoany manokana. Misy zana-tsofina ho azy ireo. Raha samy mametraka ny tenany amin'ny toeran-kafa ny tsirairay, dia hahita izay tsy ampy hamenoany ny finoany, ny hafa dia manana.
Tsy tokony hatahotra ny kristiana fa hamoy ny fivavahany raha hanaiky ny zava-misy izy. Tsy tokony hatahotra ny mpanao zavatra raha tsy ekeny ny zavatra ekeny raha manaiky ny fivavahana izy. Tsy misy na inona na inona mendrika itazonana azy ho very ny iray tena mitady ny marina. Ary raha ny tena marina dia ilay fitadiavana ilay lehilahy mpivavaka ary ny lehilahy manana ny zava-misy inona no mety hanala ny hafa?
Raha eken'ny mpitondra fivavahana ny zava-misy mangatsiatsiaka momba ny materialista, dia handringana ny lanitra miaraka amin'ireo vavahadin-kavo izy ireo manodidina ireo sampy izay ananany ao, ary esory tsy ho ela ny faniriany feno haben'ny faniriany feno fahasosorana. ao amin'ny afobe, ny afo mandoro an'ireo fahavalo tsy manaiky ny finoany sy manaraka ny foto-pinoany izay ninoany. Rehefa nanaisotra ny zava-misy tsy misy dikany izy dia hahita fa rehefa may ny sampy sy ny fako, dia misy sisa velona iray izay tsy ho voatanisa ny hiran'ny mozika na borosy.
Raha mametraka ny tenany amin'ny toeran'ny antokom-pinoana tso-po ny mpanao materialista, dia hahita fa misy loharano mipoaka ao anatiny, hery, jiro, afo, izay ahafahany mandray andraikitra, manatanteraka ny andraikiny, manala ny milina voajanahary. ary mba hahafantarantsika ny fotokevitra ifantonan'ity milina ity, handoro ny fitsarana an-tendrony sy reharehan'ny zava-misy mangatsiatsiaka sy henjana ary hanova azy ireo ho fisehoan-doka sy vavolombelon'ny fahamarinan'ny fanahy velona.
Ny fanekena fa ny fiainan'i Kristy dia duplikan'ny dian'ny masoandro, tsy midika akory izany fa ny kristiana dia mila mpanamory sambon-danitra fotsiny, mamela ny Kristiny ary ho lasa mpivadi-pinoana. Na ny kristiana na ny mpino ao amin'ny finoana hafa rehetra dia tsy manana zo hanakona ny tsena momba ny famonjena ny fanahy, mametraka fahatokisana sy monopoliany amin'ny teti-pinoana ary manandrana mamonjy famonjena ho an'ny tontolo noana amin'ny fanerena azy hividy ny entany.
Ravao ny sakana! Esory amin'ny fitokisana rehetra izay mety hanidy ny hazavana manerantany! Ny tany rehetra dia mandrehitra ny masoandro tokana, ary ny zanany mihinana ny hazavana araka izay azony atao. Tsy misy foko na olona afaka manainga an'io hazavana io. Samy mahafantatra avokoa fa ny masoandro dia mitovy daholo amin'ny rehetra. Fa ny masoandro kosa no hita amin'ny alàlan'ny maso. Izy io dia manafana ny vatana ara-batana ary mametraka ny fiainana ho an'ny zavatra rehetra mamelona.
Misy hafa koa, masoandro tsy hita maso, izay anjarantsika ny masoandro. Tsy misy olona afaka mijery ny masoandro tsy hita maso ary mijanona ho mety maty. Amin'ity hazavana ity dia ampitaina ao anatin'ny fahatsiarovan-tena ny fahatsapana ny fitaovana. Ity no Kristy izay manavotra amin'ny tsy fahalalana sy ny fahafatesana, dia ilay manaiky voalohany ary tena mahatsapa ny Fahazavana.
Ny olona ankehitriny dia afaka hazava tsara amin'ny siansa momba ny astronomia hahalala fa ny masoandro dia manao ny biraony fa tsy amin'ny sorona sy vavaka izay mety atolotra ho an'ny firenena iray mihalevona na tsy mahalala, fa amin'ny fankatoavana ny lalàna kosmika. Araka io lalàna io, ny vatana hafa rehetra any amin'ny habakabaka dia miasa tsara. Ireo mpampianatra izay miseho tsindraindray eto an-tany dia mpanompon'ity lalàna ity izay tsy takatry ny saina.
Ny hany antony nahaterahantsika ny fianakavian'ny finoana Kristiana dia tsy manome antsika zo hiantso ny tenany ho kristiana. Sady tsy manana ampihimamba isika no manana zo na tombontsoa manokana ao amin'i Kristy. Manan-jo hiteny ny tenantsika ho kristiana fotsiny isika raha ny fanahin'i Kristy, izay foto-kevitr'i Kristy, dia manambara ny tenany amin'ny alàlan'ny eritreritra sy ny teny ary ny fihetsika. Manambara ny tenany izy io, tsy voalaza. Fantatsika fa tsy avy amin'ny saina, kanefa hitantsika izany, mandre izany ary hikasika azy, satria mikosoka, manelona ary mahazaka ny zavatra rehetra. Vao manakaiky azy izany Izy io dia manohana sy mampiakatra ary rehefa eo amin'ny lalina dia eo isika no manandratra antsika. Tsy mbola azo lazaina ny fisehoana azy io amin'ny fisainana sy ny asa tsara rehetra. Io no finoan'ny mahery, ny fitiavana ny fangoraham-po ary ny fahanginan'ny hendry. Fanahin'ny famelan-keloka izy io, ilay fitaomam-panahy amin'ny fihetsika tsy feno fitiavan-tena, famindram-po ary fahamarinana, ary amin'ny zava-drehetra, dia ny Fitsipika manan-tsaina sy mampiray.
Satria ny zava-drehetra manerana an'izao rehetra izao dia milamina sy araka ny lalàna iraisana iray, ny fiainana izay tarihintsika dia miforona amin'ny farany. Rehefa tsy hadinontsika ny fitsipika fototra, dia toa fisavorovoroana daholo ny zavatra eny ambony eny. Fa raha miverina amin'ny fotokevitra isika dia takatsika ny fiantraikany.
Tsy, tahaka ny fanamainty, miaina ao anatin'ny tontolo misy zava-misy iainana isika. Matory ao anatin'ny tontolo aloky ny andro isika izao. Ny alahelontsika izao dia faly sy manelingelina ny nofinofy na nofinofy vokatry ny fiovan'ny aloka. Saingy tsy afaka matory foana ny fanahy. Tsy maintsy misy fifohazana ao amin'ny tany aloka. Indraindray misy iraka tonga, ary miaraka amin'ny fientanentana mahery, dia manome antsika mifoha ary handray anjara amin'ny asantsika marina. Araka izany dia mety hipoitra ny fanahy ka hanatanteraka ny andraikiny na, azon'ny laonin'ny nofinofy, dia mety hiverina amin'ny tany aloka sy hiadana izany. Mikoropaka amin'ny nofy izany. Na izany aza dia ho voaelingelina ny nofinofiny amin'ny fahatsiarovana ny fifohazany mandra-pahatongan'ny aloky ny handroso hanery azy ao amin'ny fanjakany, ary avy eo, miaraka amin'ny fanaintainana sy ny horohoro no hanomboka ny asany. Ny andraikitry ny adidy tsy an-kiato dia asan'ny asa sy manajamba ny fanahy amin'ny lesona ampianarin'ny adidy. Ny adidy an-tsitrapo dia asan'ny fitiavana ary manambara amin'ny mpanaiky ny fahamarinana amin'ny lesona entiny.
Ny olombelona rehetra dia mpitondra hafatra, zanaky ny masoandro tsy hita maso, Mpamonjin'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny famirapiratan'ny fitsipiky ny Kristy, hatramin'ny fahazoany sy ahatohany ny fahatsiarovan-tena velona ao anatiny. Avy amin'ny olona mahatsapa izany fahatsiarovan-tena izany dia mety manana ny tena fanomezana Krismasy raha izao no katsahintsika. Ny Fisehoan'ny Krismasy no fidirana mankamin'ny fiainana mandrakizay tsy manam-petra. Ity fanatrehana ity dia mety ho avy raha mbola any amin'ny alokaloka isika. Izy io dia hamoha ny torimaso avy amin'ny nofiny ary hahafahany tsy hatahotra ny aloky ny manodidina. Mahafantatra ireo aloky ny aloky dia tsy matahotra izy ireo rehefa toa te-hanala sy hanilika azy.